Mareykanka oo cambaareynaya ficilkii Belarus ee ka dhanka ahaa diyaarad rakaab
Xoghayaha arrimaha dibedda Mareykanka Antony Blinken
Tani waa faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka.
Bishii May 23-keedii xukuumadda Belarus ayaa si been abuur ah ugu wargalisay dayuurad ganacsi oo ku duulasay hawadeeda, hanjabaad Bamb, taas oo sababtay in shaqaalihii ay dayuuradda ku dajinayaan caasimadda dalkaasi ee Minsk, Dayuuradda Ryanair ee fadhigeedu yahay dalka Ireland oo ay saarnaayeen 126 musaafur iyo lix shaqaale ayaa ka duushay magaalada Athens ee Greece iyo waxayna kusii jeedday Vilnius, Lithuania.
Bomb ma uusan jirin, waxa aan ognahay waa intaas markii aan soo dagnay.
Xukuumadda Belarus ayaa xirtay Raman Pratasevich oo ah wariye u dhashay Belarus iyo Sofiya Sapega oo safarkiisa ku wehlisay, golaha ururka duulimaadyada rayidka ee caalamiga ah ayaa go’aamiyay 27kii May in baaritaan lagu sameeyo waxii qalad ah ee ku jira duulimaadyada rayidka, iyadoo loo danaynayo xaqiijinta badqabka iyo ammaanka duulimaadyada caalamiga ah.
Mr. Pratasevich waa nin caan ah oo dhalleeceeya madaxweynahay hogaamiyaha kali talsika dalkaasi ee Lukashenka waxuuna si musaafuris ah ugu noolyahay dalka Lithuania.
“Dowladda Mareykanka waxay si adag u cambaareynaysaa leexsashada qasabka ah ee duulimaad isaga kala gooshaya laba dal oo xubno ka ah ururka midowga Europe iyo xariggii lagula kacay wariye Raman Pratasevich oo ku sugnaa magaalada Minisk,” ayuu xoghayaha Arimaha dibadda ee Mareykanka ku yiri bayaan uu soo saaray.
“Waxaan dalbanaynaa in sii deysamadiisa oo deg deg ah. Ficilkan naxdinta leh ee uu ku kacay taliska Lukashenka ayaa halis ku ahaa in ka badan 120 rakaab ah oo ay ku jireen muwaadiniin Mareykanka u dhashay,” ayuu ku daray.
Mr. Pratasevich waa qoraa mucaarad ah iyo dhaqdhaqaaqe, waa aasaasaha warbaahinta Nexta iyo tifaftirihii hore Nexta Live, oo uu kujiro barnaamijka Telegram Messenger App, oo awood u leh inuu ka gudbo is hortaagga wararka ee ay soo rogtay dowladda Belarus taas oo xaddidaysa xorriyadda hadalka.
Sanadkii hore waxuu tabiyay doorashadii madaxtimo ee dalkaasi ka dhacday iyo sidoo kale mudahaardayadii xoogganaa ee ka dhanka ahaa guushii shakiga laheyd Lukashenka, warakiisa dartood Mr Pratasevich dowladda Belarus waxay ku eedeysay argaxisinimo iyo kicin bulsho.
“Warbaahinta xorta ah waa tiir muhiim u ah oo taageeraya ku dhaqanka sharciga iyo qeyb aad muhiim ugu ah bulshada dimoqraadiyadda ku dhisan. “
Mareykanka waxuu mar kale cambaareynayaa tacaddiyada iyo xarriiga aan sababta laheyn ee taliska Lukashenka uu ku hayo wariyeyaasha, waxaan ku garab taagannahay rabitaanka shacabka Belarus ay ku doonayaan xorriyad, demoqoraadiyad iyo mustaqbal barwaaqo leh taageerada baaqooda ah ah in taliska uu xurmeeyo xuquuqda xuquuqul insaanka iyo xorriyadda aasaasiga ah.